(က)-ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင်‌့ အသက်(၂)နှစ်အောက် ကလေးများအား ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးခြင်းကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၌ မည်သည်‌့အချိန်ကာလတွင် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်နှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း | Pyithu Hluttaw
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ (၂၀. ၁၁. ၂၁၀၈)
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါသူထက်ဝက်ကျော်သည် ကလေးသူငယ်များဖြစ်ပါကြောင်း၊ အသက် ငါးနှစ်အောက် ကလေးအယောက် ၁၀၀ မှ ၁၅၀ ကြား နေ့စဉ်သေဆုံးလျက်ရှိသည့်အပြင် အသက်တစ်နှစ် အောက် ကလေး ငယ် ၁၀ ယောက်တွင် ခြောက်ယောက်သာ ကာကွယ်ဆေးများကို အပြည့်အဝ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ရရှိနိုင်ပါ ကြောင်းနှင့် ကလေးသုံးယောက်တွင် တစ်ယောက်သည် အာဟာရမပြည့်ဝမှုကြောင်‌့ ပုညှက်နေပါကြောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင်‌့ လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍများအတွက် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲ ချထားမှုများသည် အာဆီယံ နိုင်ငံများနှင်‌့ နှိုင်းယှဉ်ပါက အနိမ်‌့ဆုံးဖြစ်နေခြင်း၊ အာရှနိုင်ငံများအကြားတွင် အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝင်နေခြင်းများကို UNICEF က ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းများအရ သိရှိရပါကြောင်း၊
မိခင်ဗိုက်ထဲ ပဋိသန္ဓေတည်ချိန်မှစ၍ မွေးဖွားပြီး နှစ်နှစ်သားအထိ ဘဝအစပထမရက် ၁၀၀၀ တွင် အာဟာရဓာတ်ဖြည်‌့တင်းပေးခြင်းသည် လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် ကျန်းမာစွာ ဆက်လက်ရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးရန် အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်နိုင်ရန် အာမခံချက်များ ရရှိမည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ အခြေအနေကောင်းများအတွက် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင်‌့ ပြန်လည်နေရာချ ထားရေးဝန်ကြီးဌာနက မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင်‌့ နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်‌့ရ ဒေသများမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင်‌့ မွေးဖွားလာသော အသက်နှစ်နှစ်အောက် ကလေးများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်နှင်‌့ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အသက် ၉၀ ပြည်‌့နှစ် အဖိုး၊ အဖွားများအား လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ခြောက်လ အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင်‌့ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများစာအုပ်တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင်‌့ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် မူဝါဒသုံးရပ်၊ ရည်မှန်းချက် ၁၇ ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ် ၂၅ ချက်ပါပြီး အမှတ်စဉ်(ည)တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင်‌့ ၎င်းတို့မှမွေးဖွားလာသော ကလေးများအတွက် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ကြေးနှင်‌့ ဘိုးဘွားများအတွက် အသက် ၈၅ နှစ်မှစ၍ လူမှုရေးပင်စင်ပေးခြင်းကို ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပါဝင်သည်ဟု ထည်‌့သွင်းဖော်ပြထားပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများခေါင်းစဉ်အောက်က အချက် ၁၈ ချက် အမှတ်စဉ် (ဋ) တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပါဝင်သော်လည်း အမှန်တကယ်ရန်ပုံငွေချထားပေးသည့်အခါ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါကြောင်း၊
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသည် လူဦးရေ ၆၁၈၄၈၂၉ ဦးဖြင့် နိုင်ငံ၏ ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးနှင့် အမျိုးသားထက် အမျိုးသမီးဦးရေ ပိုမိုများပြားသည့် တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် နိုင်ငံ၏ မျှော်မှန်းအသက် ၆၆.၈၂ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ပျမ်းမျှ ၆၁ နှစ်ဖြင့် သေဆုံးနေပြီး အရှင်မွေးလူ ၁၀၀၀ တွင် တစ်နှစ်အောက်ကလေးသေဆုံးနှုန်း ပျမ်းမျှ ၆၂ ဦးရှိဖြစ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ၈၇ ဦးထိ သေဆံးလျက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီး၊ အရှင်မွေးလူ ၁၀၀၀ တွင် ငါးနှစ်ကလေးသေနှုန်း ပျမ်းမျှ ၇၂ ဦးရှိရမည်ဖြစ်ပါသော်လည်း ၁၀၅ ဦးအထိ သေဆုံးနေသော တိုင်းဒေသကြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ လူဦးရေပိရမစ်ပုံတွင် မွေးနှုန်းများကျဆင်းနေသည်ဟု ဖော်ပြထား ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လိုက်မည်ဆိုပါက မွေးဖွားနှုန်းများလည်း တက်လာပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းသောကလေးများ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါကြောင်း၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၏ ဆိုးဝါးသည့်ကိန်းဂဏန်းများကိုလည်း လျှော့ချနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၎င်း အစီအစဉ်ကို မိဘများကလည်း မျှော်လင့်တစ်ကြီးစောင့်စားနေကြသည့်အတွက် လူမှုကာကွယ် စောင့်ရှောက် ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သည်‌့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင်‌့ ၎င်းတို့မှ မွေးဖွားလာသော အသက်(၂)နှစ် အောက် ကလေးများအား ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးခြင်းကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၌ မည်သည်‌့ အချိန်ကာလတွင် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင်‌့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးအောင်
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင်‌့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပြီးခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုကာကွယ်စောင်‌့ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင်‌့ မဟာဗျူဟာစီမံချက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင်‌့ ၎င်းတို့မှ မွေးဖွားလာသော အသက်နှစ်နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးရေး အစီအစဉ် များကို ကလေးသူငယ်များ၏ အာဟာရဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော ပုညှက်မှု ရာခိုင်နှုန်းနှင်‌့ အခြား အချက်အလက်များပေါ်အ‌ခြေခံပြီး ဦးစားပေးဒေသများရွေးချယ်ကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင်‌့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင်‌့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီး ထုတ်ဝေသည့် လူဦးရေနှင့်ကျန်းမာရေးအဆင်‌့အတန်း (Democratic Health Serbia) ၂၀၁၅-၁၆ ခုနှစ်အရ အာဟာရဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော ကလေးသူငယ်များအတွက် ပုညှက်မှု ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင်‌့ ပုညှက်မှုအမြင်‌့ဆုံး ဖြစ်သော ချင်းပြည်နယ်၊ ပုညှက်မှုနှုန်း ၃၇.၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်နှင်‌့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာနည်းပါးမှုကြောင်‌့ ကူးစက်ရောဂါအသွင်ဖြင်‌့ မကြာခဏဖြစ်ပွားတတ်သည့် နာဂကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်‌့ရဒေသများတွင် ၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင်‌့ ယင်းတို့မှ မွေးဖွားလာသော အသက်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်များအတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေး ရေးကို အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်အပြင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် ပုညှက်မှုနှုန်း ၃၉.၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့် ကယားပြည်နယ်နှင့် ပုညှက်မှုနှုန်း ၂၅.၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ဒေသများတွင် ပထမဦးဆုံး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကလေးသူငယ်များအကြား ပုညှက်မှုနှုန်း ၃၇.၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရသည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ၃၆.၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်ပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အတိုးနှုန်းသက်သာသောချေးငွေနှင့် အဆိုပါအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ချေးငွေကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (International Development Association-IDA)မှ ချေးယူသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုချေးငွေကို ကနဦး ငါးနှစ်အတွင်း ပေးဆပ်ရန် မလိုသေးဘဲ ခြောက်နှစ်‌မြောက်မှစ၍ အကျေပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်ပါ ကြောင်းနှင့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အကျေအလည် ပြန်လည်ပေးဆပ်သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အတိုးနှုန်းကို ချေးယူရမယ့်ငွေကြေးအမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီး တင်ပြပါအတိုင်း ပေးချေသွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် ချေးယူမယ်ဆိုပါက တစ်နှစ် ၁.၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယူရိုငွေကြေးဖြင့် ချေးယူမယ်ဆို ပါက တစ်နှစ် ဝ.၆၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ အထူးဖန်တီးထားသော ငွေကြေး(Special Drawing Rights-SDR)ဖြင့် ချေးယူမည် ဆိုပါက တစ်နှစ် ၁.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးချေသွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရာတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် တင်ပြပါ တိုင်း ဒေသကြီး/ပြည်နယ်နှစ်ခုတွင် ပထမသုံးနှစ်တာကာလအတွက် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့်ပါ ပေါင်းစပ် အကောင်အထည်ဖော်မည့် Co-financing နည်းလမ်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စတုတ္ထနှစ်မှစတင်ကာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သွားရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာထည့်ဝင်ရန်ပုံငွေနှင့် ကမ္ဘာ့ချေးငွေတို့ပေါင်းစပ် အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အကောင်အထည်ဖော်မှုပထမနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေက ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး အတွက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွက်၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒုတိယနှစ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ တတိယနှစ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ နောက်ဆုံးစတုတ္ထနှစ်တွင် အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာထည့်ဝင်ရန်ပုံငွေ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် MCCT လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအနေဖြင့် ချင်း ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ နာဂဒေသတို့တွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစတင်ကာ ချင်းပြည်နယ်တွင် Lift fund ရန်ပုံငွေ၊ ရခိုင် ပြည်နယ်နှင့်နာဂဒေသတို့တွင် နိုင်ငံ‌တော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ကယား ပြည်နယ်တို့တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစပြီး နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ထို့အတူ ပုညှက်မှုနှုန်းမြင့်မားမှုနှင့် အခြားအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ကျန်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များကိုလည်း နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားမှု ပေါ်မူတည်ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အဆင့်ဆင့်ဆက်လက်တိုးချဲ့အကောင်အထည် ဖော်သွားရန်လျာထား စီစဉ်ထား ရှိပါကြောင်း၊
သို့ပါ၍ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် ချေးငွေ၊ နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတို့ဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ရေးကို ဆက်လက်တင်ပြဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပါသည်။